Waa maxay bisaduhu | Bisadaha Noti
Waa maxay bisaduhu
Bisaduhu waa xayawaan aan caadi ahayn. Waxay ahaayeen xubnaha kaliya ee ka mid ah qoysaska jecel ee rabay inay la noolaadaan aadanaha, sidaas darteed dhisida xiriir gaar ah oo u dhexeeya boqortooyada xayawaanka. Waxaan aaminsanahay in aan aqbalnay iyaga, laakiin dhab ahaantii saaxiibtinimada na mideysa waa la ilaaliyaa maxaa yeelay waxaan aqbalnaa qawaaniintooda iyagoo ku beddelaya jacaylka weyn ee ay ina siiyaan.
Laakiin, Ma garanayno bisaduhu runti waa maxay?
1 Waa maxay bisaduhu?
2 Waa maxay deegaanka bisadu?
3 Halkee bisaduhu ku nool yihiin?
4 Maxay bisaduhu cunaan?
5 Noocyada bisadaha
5.1 Yurub ama Roomaan guud
Waa maxay bisaduhu?
Bisaduhu waa noocyada felis catus, taasi waa, iyagu waa felines, si la mid ah libaaxyada, shabeelka, pumas, iyo kuwo kale. Jidhka xayawaankan waxa sameeya oo loogu ugaadhsadaa, markaa iyagu waa hilib-cunno, taas oo macnaheedu yahay inay badbaadaan waa inay ugaarsadaan ugaarsigooda oo ay ku quudiyaan. Tani waa wax aan ku adkaan iyaga, maxaa yeelay waxay ka maqli karaan shanqarta jiir meel 7 mitir u jirta mahadsanid dareenkooda maqalka ee soo kordhay, sidoo kale waxay leeyihiin aragti habeennimo oo aad u fiican.
Waxay yihiin iswaafajin, dhaqdhaqaaq badan waxayna leeyihiin xusuus aad u wanaagsanIn badan si ay ugu baran karaan waxyaabo cusub indha indheyn iyo khibrad. Waxay miisaankoodu u dhexeeyaa 4 ilaa 7kg (ama in ka badan, haddii ay tahay nooc gaar ah, sida Savannah, oo ah bisad isku dhex jirta oo ilaa 11kg ah).
Guud ahaan waa xayawaan keli ah oo aad u dhul badanLaakiin tani way is beddeli kartaa haddii laga tagay ama ay leeyihiin dabeecad aad u bulsheed. In kastoo, haa, waa inaad ogaataa inay marwalba rabaan inay helaan meel ay aadi karaan mar kasta oo ay doonayaan inay keligood waqti la qaataan.
Cimriga waa qiyaastii 20 sano, laakiin way ka gaabi kartaa ama ka sii dheereyn kartaa iyadoo ku xiran hadba cuntada la siiyo, ha ahaadaan kuwa nafaqo leh iyo haddii kale (bisadaha nafaqada leh ayaa ka cimri dheer kuwa "dhan" ah, maadaama aysan u baahnayn inay raadsadaan lammaane iyo, sidaas darteed, ma dagaallamaan), iyo inay dibadda u baxaan iyo haddii kaleba (guud ahaan, haddii ay guriga joogaan waxay ka cimri dheer yihiin kuwa dibadda u baxa).
Waa maxay deegaanka bisadu?
Waqtigaan la joogo, waxaan ka helnaa bisado u dhow halka aan ku nool nahay maaddaama ay halkaas tahay meesha ay ku leeyihiin cunno aamin ah iyo hoy macquul ah. Laakiin waagii hore waxay ku noolaayeen keymo, jiq cufan iyo haramo, taas oo ah halka ay ku nooshahay bisadda duurjoogta ah ama buurta (felis silvestris) awoowe toos ah oo soddon ah oo nala wadaaga fadhiga.
Halkee bisaduhu ku nool yihiin?
Maanta waxaan heleynaa bisado adduunka oo dhan: xeebta, berriga, buuraha, lamadegaanka ... Dhibaatadu waxay tahay in bini aadamku aad u magaaleeyay meeraha oo ay abuureen khataro badan, in badanaa guriga ugu wanaagsan ee doofaarku si sax ah annagaa leh: guri, sagxad, dabaq, laakiin ma aha wadada.
Ka taxaddar: waxaa jira bisado aan la xiri karin, sida bisadaha bahalka ah, tusaale ahaan, kuwaas oo ah xayawaan ku dhashay kuna barbaaray bannaanka, iyada oo ku dhowaad aan lala xiriirin aadanaha. Si loo hubiyo inay ku nool yihiin farxad iyo nabadgelyo, way ku habboon tahay - mar kasta oo ay suurtagal tahay, dabcan - in la geeyo beer aad u ballaaran ama beero, ama loo sameeyo gabbaad ballaadhan oo ka xidhan dhammaan afarta dhinac.
Maxay bisaduhu cunaan?
Bisadaha Waa xayawaan ay sameeyeen iyo ugaarsiga xayawaanka yaryar, gaar ahaan jiirka iyo shimbiraha yaryar. Waxaan badanaa aragnaa iyagoo ciyaaraya oo xitaa dila noocyo kale oo xayawaan ah, sida cayayaanka ama xitaa masaska yaryar, laakiin ma aha wax aad u badan inay ku quudiyaan.
Markay la noolaadaan aadanaha, ama markay daryeelaan aadanaha, waxay cunaan quud, ha ahaato mid qalalan ama qoyan, ama dhif ah Barf ama cuntada guryaha lagu sameeyo. Tan dambe ayaa ah tan ugu fiican ee la bixin karo, maadaama ay tahay in la daryeelo jirkooda, dareenkooda, iyo ugu dambeyntiina iyaga oo ah kuwa ugaarsada inay iyagu yihiin.
Laakiin dabcan, quudinta ayaa aad noogu habboon, maadaama aan si fudud u fureyno una adeegno. Waxna ma dhacaan: way fiicnaan doonaan haddaanay ku jirin badarka (Ma haystaan ​​enzym-yada lagama maarmaanka u ah inay si fiican u liqaan, taas oo u horseedi karta iyaga dhibaatooyin caafimaad muddada gaaban ama muddada dhexe) ama wax soo saarkooda (ma jiro qof maskaxdooda saxda ah cuni kara maqaarka, beaks, dufanka, ... waxaa lagu siriyey dheeh iyo badiyaa dhadhan macmal ah).
Markii tan la ogaado, su'aal baa soo baxda: had iyo jeer ma waxaan uga tagnaa cuntada si xor ah oo la heli karo mise waxaan siinnaa iyada oo loo qaybiyay dhowr qiyaasood? Hagaag, waxaa jira fikrado dhamaan dhadhanka. Aniga Waxaan kugula talin lahaa inay saxankoodu had iyo jeer buuxaan sababo kala duwan awgood:
Waa mid aad u deggan oo lagu kalsoonaan karo: gaar ahaan haddii aad tahay qof mashquul badan ama saacado badan dibadda ku qaata. Maskaxda ku hay in bisaduhu ay cunaan dhowr jeer maalintii, in yar markiiba.
Bisadu way cuni kartaa markasta oo ay rabto: haddii cuntada la siiyo ay tahay mid tayo sare leh, waxay jaangoyn doontaa xaddiga cuntada ay isticmaasho, taas oo marka loo eego ay noqonayso mid yar maxaa yeelay hodan ku ah borotiinka xoolaha, way qancin doontaa ugu dhakhsaha badan.
Welwelka cuntada waa laga fogaadaa: maxaa ku dhici kara bisadaha wax cuna marka dadkoodu ay rabaan oo keliya.
Waxaa jira in ka badan 40 nooc oo bisado ah, laakiin kuwa ugu caansan waa:
Yurub ama Roomaan guud
Waa waxa aan ku aragno jidadka, hoyga, iwm. Waa xayawaan aad u qurux badan, oo miisaankoodu gaadhayo 7-8kg (Dheddigga xoogaa yar), oo leh midab jaakad ah oo aad ugu kala duwanaan kara shaqsi ahaan iyo shaqsi ahaanba; Xaqiiqdii, waxay noqon kartaa mid midable ah ama midable ah, midab madow, cadaan ah, midab liin ah, midab cawl ah ama midab liin ah ah, ...
Bisadda guud ee yurubiyanka, mongrel-ka waddooyinka
Waa nooc bisad ah oo lagu garto yeelashada jaakad dheer, midabbo kala duwan leh, madax wareegsan iyo sanka oo fidsan. Cabirkoodu waa dhex dhexaad ilaa weyn, dabeecadooduna caadi ahaan waa deggan tahay, aad ayeyna u badan tahay oo haddii aad caadeysato la macaamilidda bisadaha Yurub, tusaale ahaan, way kula yaabi kartaa (Waxaan ka hadlayaa khibrad 🙂).
Bisadda joogtada ah
Waa nooc asal ahaan ka soo jeeda California, 1960s. Waxay ku leeyihiin sumcad inay aad u jecel yihiin oo ku tiirsan yihiin, iyo sidoo kale qaali. Dhogortiisa waa cadaan, oo leh madaxa, dhabarka iyo dabada oo ah midab bunni ah.
Loo yaqaan bisadda loo yaqaan 'sphinx cat', waa nooc ka mid ah isbeddellada hidde-wadaha dabiiciga ah ee ka dhacay Kanada. Sanadihii 60-meeyadii qaar ka mid ah kuwa wax soo saara ayaa bilaabay inay doortaan kittens-ka oo ay markii dambe ka gudbaan, sidaa darteed maanta waxaan haynaa bisado aan lahayn timo muuqda oo leh madaxyo saddex-geesood ah, indho waaweyn, iyo jir dhexdhexaad ah ilaa dhexdhexaad dhexdhexaad ah.
Dhammaan wixii ku saabsan Sphynx
Taasna waan ku qabannay. Haddii aad rabto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan bisadaha, riix halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Riyooyin » Waa maxay bisaduhu
Marka bisadaha meow
Maxay bisaduhu u dhuuntaan?